Tsy misy intsony ny Googling ... fa afaka manao Yahoo! | Martech Zone
Tsy misy Googling intsony… fa afaka manao Yahoo!
Alahady, Aogositra 20, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
The Seattle Times mitatitra fa mandeha i Google aorian'ireo olona mampiasa foana ny veriny. Nahita zavatra tsara ny Marketing Pilgrim bilaogy avy amin'ny Yahooer izay milaza… tsy afaka Google ianao fa aza misalasala mankamin'ny Yahoo!
Tao anatin'ny hetsika famoahana iray, Yahoo! nanjary milay ary Google lasa mpivarotra ambongadiny. Nanao scouring aho ary tsy nahita fanehoan-kevitra avy amin'ny Google momba ny antony nisafidianan'izy ireo ity hetsika ity. Toa ahy izany fa teknika marketing virosy mahafinaritra… mampidira matoanteny vaovao ho an'izao tontolo izao izay misy ny anaranao ao, ka hitaraina ianao? Ny zavatra manaraka fantatrao fa ny indostrian'ny mozika dia hivadika ho olon-dratsy ary hanomboka hitory ny olona amin'ny fizarana mozika mahafinaritra! (Andraso…)
Nitsidika ny foiben'i Google aho nandritra ny dia nataoko tamin'ny taon-dasa. Talanjona tamin'ny oniversite aho, scooter, lakozia, seza fanorana, sns. Nisy eritreritra vitsivitsy tonga tao an-tsaiko… oh, cool, be loatra ny vola eto amin'ity toerana ity, ary afaka mampiasa kaody akanjo ireto olona ireto! Fa ankehitriny dia hita fa ao amin'ny oniversite izao ireo 'corporat'. Ny iray naneho an'io dia rehefa Trano Cambrian dia nesorina teny ivelan'ny campus rehefa avy nanandrana nanome sakafo an'i Google tamin'ny pizza arivo.
Ho an'ireo orinasa izay tena nahomby nifototra tamin'ny marketing viral, mahagaga ahy fa rehefa tonga ny fotoana hanehoana ny tena 'cool' lazain'izy ireo dia lasa adala fotsiny izy ireo. Ny Best Buy dia nanao an'ity tamin'ny herintaona lasa izay rehefa tonga ny Improv Everywhere nisy olona an-jatony niseho toa ny mpiasa Best Buy ary nisahotaka izy ireo avy eo, niantso ny polisy, ary nomena ny boot izy ireo.
Fehiny, raha hiteny amin'ny olon-kafa ianao fa vaovao, fohy, mafana, baomba, tery sns ... dia tsara kokoa raha tsy atao ao anaty volo iray fotsiny ianao. Google dia nandatsaka 10 degre fotsiny tamin'ny coolmometre ahy.
Andriamatoa Google malala,
Azafady aza esory ny mailaka mpamaky, Analytics, fandraketana an-tsarintany, kaontina ifanakalozan-kevitra na kaonty pejy fandraisana google. Mbola mieritreritra aho fa milay ianao. Tsia as mangatsiatsiaka.
Yahoo! tokony hanararaotra io fotoana io. Manoratra amin'ny mailaka ve ianao?
Indostrian'ny sarimihetsika IV - bibilava eny ambony fiaramanidina
Tsy fahadisoan'izy ireo izany fa anao
21 Aogositra 2006 amin'ny 4:16 PM
Google dia tokony hiaro ny anarany raha tsy izany dia hanana ny zon'ny mpamorona sy ny tranonkala vetaveta rehetra mety hampiasa ilay teny hisarika ny fifamoivoizana. Mazava ho azy fa maniry anao ny Yahoo! toy ny matoanteny. Tsarovy ny dokam-barotra amin'ny fahitalavitra nanontany hoe "Do You Yahoo !?" Mampalahelo fa tsy nisy nanao Yahoo. Saingy tsy nisy dokambarotra, nanomboka Googling ny olona. Ahoana ny filalaovana sary ho an'ny Yahoo! Tsy afaka manao dokam-barotra na miangavy mangatsiatsiaka ianao, izany no mampivadika anao ho verbe.
Ny olan'ny tranon'i Cambrian dia mampiseho ny lafiny maizina lehibe an'ny Google: Tsiambaratelo izy io. Ny olona rehetra izay mandeha an-tongotra amin'ny fananana Google tsy voantso dia voaroaka. Voaroaka aho. Somary nahafinaritra ihany.
21 Aogositra 2006 amin'ny 6:07 PM
Te-hiombon-kevitra aminao aho momba ny Google mila miaro ny zon'ny mpamorona azy; na izany aza, hitako fa mahaliana foana ny tsy mitaraina ny orinasa mandra-pisosa ny vola. Google dia tsy nitaraina ho fanombohana raha nanomboka nampiasa ny teny hoe 'googling' ny olona; Azo inoana fa noana tamin'ny fiheverana izy ireo. Na izany aza, ankehitriny fa afaka manana departemanta ara-dalàna izy ireo, dia toa tsy marina izany ankehitriny hiezaka hiaro ny anarany tsara izy ireo.
Mitovy dika amin'ny indostrian'ny firaketana izany. Rehefa mpitendry zavamaneno tapaka ianao dia miangavy ny olona hihaino… rehefa tapitrisa tapitrisa ianao dia tsy maintsy mifaly amin'ny RIAA ary manomboka mitory.